Semalt Kuongorora Zvishandiso
Semalt Nyaya Dzekubudirira
Unoda kukwikwidza zvakanyanya paGoogle? Semalt.net ndiyo mhinduro yakanakira bhizinesi rako. Iyo ine iyo yakasimba midziyo yekukupa iwe yepamusoro yepamusoro kuGoogle. Iyo saiti ine mushandisi inoshamwaridzana uye yakanyanya intuitive. Mune imwe chete maonero, iwe une zvese zvaunoda kuti ubudirire pamunwe wako.
Izvo Semalt zvishandiso zvekuongorora zvinowanikwa zviri nyore pane webhusaiti. Iwe unowana kuti uone zvigadzirwa zvavanofanira kupa, zvakawanda pamusoro pevabereki kambani, nyaya dzekubudirira kwavo uye dzakasiyana siyana sarudzo kuti ubate navo. Iwe une sarudzo yekupinda mukati kana kugadzira account neSemalt.net. Kugadzirwa kweakaunti kunobatsira iwe kuchengetedza yako SEO mapurojekiti muSemalt.
Web analytics inosanganisira kuunganidza, kubika uye kuongorora webhu data. Ichi chiitiko chakaomarara chinobatsira kuona kana webhusaiti iri kuwana zvainoda uye zvinangwa. Kubva pane yakaongororwa data, zvirinani zvirongwa zvekuvandudza webhusaiti zvinobva zvagadzirwa. Iwo Semalt ongororo maturusi ndizvo zvine simba zvekushandisa kuti ubatsire kuita izvi nezvimwe.
Izvo Semalt zvekuongorora zvishandiso zvakakamurwa muzvikamu zvina.
Muchikamu chino, iwe unowana maturusi anodiwa pakuongororwa kwakazara kwewebsite yako. Chikamu cheSERP chine zvikamu zvitatu.
a. Mazwi akakosha mu TOP: Pano iwe uchaona huwandu hwemazwi akakosha ako saiti webhusaiti muGoogle TOP 1-100 michero yekutsvaga yemhepo zvakapesana neyakambotanga. Iwe unowanikwawo kuona chati inoratidza nhamba yemazwi akakosha muGoogle TOP nekufamba kwenguva. Uine chishandiso ichi, unogona kutarisa shanduko muhuwandu hwemazwi akakosha ayo webhusaiti yako anoiswa mu TOP. Pakupedzisira, iwe unogona kutarisa iyo yakanyorwa mapeji ewebhusaiti yako uye yavo nzvimbo yeSERP yeimwe yakakosha kiyi.
b. Mapeji akanakisisa : Heino, iwe unopihwa njere mune ako akanakisa traffic-inogadzira mapeji. Iwe uchatsvaga chati inoratidza shanduko muhuwandu hwemapeji ewebhusaiti mu TOP kubva pakagadzirwa chirongwa chako kusvika nhasi. Iwe zvakare uchakwanisa kuziva huwandu hwemapeji ewebhusaiti muGoogle TOP 1-100 organic yekutsvaga mhinduro, seyakapesana neyamberi nguva. Iwe unogona zvakare kuona seyadhibhari inopesana neyakajairika manhamba pfupiso. Pane imwe chati yatinoti iwe izive iwe shanduko muhuwandu hwemashoko akakosha ako mapeji akasarudzwa akaiswa mu TOP kubva pazuva rekutanga kwemapeji ako.
c. Makwikwi: Semalt inokupa iwe kunzwisisa mune ako akwikwidzi webhusaiti kuitira kuti iwe ugone kudzidza kubva kwavari uye kugadzirisa rako razvino bhizinesi chirongwa nenzira. Izvi zvinokubatsira kuti uwane mawebhusaiti ese muGoogle TOP 1-100 yemashoko akakosha akafanana neako ako webhusaiti renzvimbo. Iwe unozoratidzwazve chinzvimbo chako webhusaiti yako pakati pevaikwikwidza. Iwe unozopihwa nzwisiso muhuwandu hwehuwandu hwemashoko akagoverwa ayo vakwikwidzi vako vakasarudzwa vakaisa mu TOP. Iwe zvakare uchawana tafura iyo iwe yaunogona kuona iyo nhamba yakagoverwa mazwi akakosha ayo webhusaiti uye ako anokwikwidza chinzvimbo eGoogle TOP. Kubva patafura iyi, kuongorora musiyano muhuwandu hwemashoko akagoverwa kusiyana neakambotangira zuva kunova nyore.
Izvo zvakakosha kuti iwe uzive kana Google ichitarisa iyo peji rako rewebhu rakasarudzika kana kwete. Mumwe munhu anogona kunge akopa peji rako rewebhu uye kana ravo ratatidzwa nekukurumidza pane rako, Google ichaisa peji rako rewebhu kunyorwa uye icharatidza zita ravo kune yekutanga zvinyorwa zvemukati. Iwe uchazoda kutarisa izvi nekuti Google inoranga masaiti ane huwandu hukuru hwezvinyorwa. Pano iwe unozoona kuti Google inobata peji rako rewebhu seyakasarudzika kana kwete. Semalt.net inoita kuti iwe ugone kuona yako yakasarudzika peresenti chiyero kukubatsira iwe kuziva kana webhusaiti yako inoonekwa seyakasiyana kana kwete. Mubairo we 0-50% chimwe chinhu chausingade kuva nacho - izvi zvinoreva kuti Google inofunga peji rako rewebhu zvakapetwa. Chiyero che58% -80% zvinoreva kuti Google inofunga kuti peji rako rewebhu inyore zvekare. Ichi chiero pakati asi Semalt inogona kukubatsira kuti uite zviri nani. Mubairo we81% -100% chiratidzo chakanaka chekuti uri kuita zvinhu pano. Google inotarisa nezvako zvemukati zvakasiyana. Izvi zvinobatsira kwazvo chinzvimbo chako.
Iwe uchawana "zvemukati" chishandiso chinokubatsira kuti utarise zvese zvirimo zvinoonekwa naGoogle pane peji rako rewebhu. Iyo inotaridzawo yakapetwa zvikamu zvezvinhu zviri peji rako rewebhu.
Chimwe chishandiso chauchawana chakanakira i "yekutanga yezvinyorwa zvinyorwa" chishandiso chinounza nzvimbo dzese idzo Google dzinoona sepakutanga zvinyorwa zvemukati peji rako rewebhu. Zvinotaridza iwe chaicho chikamu chezvinhu zvako zvinowanikwa mune mamwe mawebhusaiti kuti iwe utarise munzvimbo idzo kuti dziwedzere nani chiyero chako chakasiyana. Semalt ine timu yevanyori vanyori vanogona kukubatsira iwe kuita yako yewebhu mapeji seakasarudzika sezvinobvira. Ivo vanogona kufambidzana nyore nyore pane semalt.net.
Mushure mekupinda muakaunti yenyu yeGoogle, muve nekuwana iyo Google webmasters chishandiso. Muchikamu chino, iwe uchaona kuti webhusaiti yako inoonekwa sei mukutsvaga mhinduro kuGoogle. Ichakubatsira iwe kuona zvine indexing nyaya. Iwe unozogonawo kuendesa mawebhusaiti ako uye sitemaps kunge rizere runyorwa uye kukumbira kurongedza kwavo neGoogle.
Iwe unozove zvakare nekuwana metric inoratidza kushanda kwewebsite yako. Izvi zvinobatsira kuziva zvauri kuita zvakanaka uye izvo zvinhu zviri kuita zvisiri izvo zvinodzivirira saiti yako kuiswa muGoogle TOP 1-100.
Iyo sitemap chishandiso chinobvumira iwe kuendesa yako webhusaiti sitemap kuGoogle kuitira kuti iwe ugone kudzidza iyo satemaps akaiswa index uye ayo ane zvikanganiso.
Iyo peji rekumhanyisa analyzer chishandiso chine simba icho chinoratidza yako peji peji nguva, nhamba yekubudirira kuongororwa iwe unayo uye nhamba yezvikanganiso yekugadzirisa. Ichi chishandiso chinokupa chikamu muzana kune vese desktop uye nharembozha dzepepa rako rewebhu. Iyo yekumhanyisa kumhanya kwewebhusayithi yako inokanganisa mamiriro ako, saka chishandiso ichi chisina mutengo.
Mubairo we 0-49 unoratidza kunonoka kwakanyanya. Mubairo we50-89 unoratidza pakati peanomhanyisa whirl huwandu hwe 90-100 inoratidza kumhanya kwakanaka.
Semalt zvakare inokupa iwe unzwisise kuti mushandisi-ane ushamwari webhusaiti yako nekutevedzera maitiro ekuraisa mu desktop desktop uye mune mobile browser. Izvi zvinobatsira kukuratidza kuti takagadziridza sei peji rako rewebhu kukurudzira kweGoogle SERP.
Paunopinda muakaunti yako, iwe unoendeswa kune yako dashboard kwaunowana sarudzo dzekushandisa mafirita kuwana yako mapurojekiti anodiwa uye kuwana ikozvino data. Iwe unogona kuparura mapurojekiti ako nekuwedzera zvidimbu. Iwe zvakare une sarudzo yekugadzirisa mapurojekiti ako nenzira dzakasiyana siyana dzekutarisa kufambira mberi kwemawebsite ako.
Semalt inopa zvigadzirwa zvepamusoro zveSEO optimization yako. Izvo zvigadzirwa zvakanyorwa zvinosanganisira:
AutoSEO: Izvi zvinobatsira kukupa iwe zvirinani webhusaiti, inovandudza webhusaiti yako, inobatsira kukwezva vashanyi vatsva uye inowedzera bhizinesi rako 'pamhepo. Iyo AutoSEO masevhisi Semalt inopa ndeyechipiri kune imwe.
Yakazara SEO: Iine yakazara SEO, Semalt inokupa iwe zviri nani webhusaiti optimization, yakanaka ROI, inobatsira iwe kuisa mari mune yako ramangwana nekuchenjera uye inopa kukurumidza, inoshanda uye yehurefu mhedzisiro. Iwe unogona kuverengerwa pakati peGoogle TOP zana mawebhusaiti kana iwe ukatangisa yako Yako yakazara SEO mushandirapamwe neSemalt.
E-commerce SEO: Iwe hausi kuzowana iri nani SEO yekushambadzira webhusaiti yako yeE-commerce pane Semalt's E-commerce SEO. Semalt anoitira iwe basa - vanounza vatengi chaizvo! Vanobatsira kusimudzira yako yakaderera-frequency keyword queries kuti uwedzere kuoneka kune vashanyi, ivo vanokupa iwe niche kuongororwa uye iwe chete unobhadhara kune mhinduro.
Kuongororwa: Semalt's analytic webhusaiti zvishandiso zvinobatsira iwe kutarisa soko rako, tarisa zvinzvimbo zvevanokwikwidza vako zvine chekuita neyako uye vanounza topnotch yakazara analytics bhizinesi ruzivo. Iwe zvakare uchawana misika mitsva. Ivo vanokubatsira iwe kushandura data rako muPDP uye EXCEL mafomati - akadaro ehupenyu anoponesa!
SSL: Semalt inopa chengetedzo kune ako webhusaiti. Izvi zvinogonesa kuchengetedzwa kwekuvanzika kwevashandisi vako zvakare. Iwe unenge uine vashanyi vazhinji kubva kuGoogle uye Google Chrome inokupa iyo yakasviba mutsara.
Mushure mekuongorora zvishandiso uye zvigadzirwa paSemalt.net, tinosvika pakusangana Semalt padanho rakadzama .
Pano iwe unosvika kuti uone yavo inoshanda yevanyanzvi uye kunyange uwane maonero ezvimbo yavo yekushanda.
Zvigadzirwa zvaSemalt zvine mutengo unoshamwaridzana nekuti ivo vanonyatsoda kuti bhizinesi rako ribudirire. Iko kuronga kwako kana iwe uchida kushandisa masevhisi avo pamwedzi, pese pamwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu kana gore rega.
Vatengi vanofara vaSemalt vanosiya nemwoyo wose kuongororwa kwevakawanda shanduko yekutendeuka yavakange vave nayo kubvira pavakapa mabhizinesi avo mumaoko akachengeteka aSemalt.
Iyo Semalt blog inowanikwa kune wese munhu anoda ruzivo rwakakosha nezve SEO kubva pane zvekutanga kune zvazvino zveindasitiri nhau.
Panzvimbo yekubatsira yaSemalt, iwe unogona kuwana rubatsiro kana iwe ukaramba.
Unoda kuita imwe mari yekuwedzera? Semalt akakufukidza ne yavo mutengesi chirongwa paunoshambadzira yavo topnotch SEO masevhisi.
SEMALT SIMU DZESVONDO
Iwe unogona kuwana pamusoro pe5000 mawebhusaiti ayo ave akanyanya kubudirira nekuda kwaSemalt. Iwe haufungi kuti inguva yako webhusaiti iri pane iyo rondedzero zvakare?
TINOGARA TAKANYANYA NESEMALT
Semalt ndeyemagariro. Iwe unogona kubata navo pama media media, email uye yavo hotline inowanikwa zvakare. Iwe unogona zvakare kudonha nekero yavo yemuviri kana iwe uri munharaunda.
Mumwe haakwanise kuramba chokwadi chekuti Semalt yakatsaurirwa zvakanyanya kubudirira kwevatengi vavo kubva kune akawanda ezvishandiso ane masimba avakapa. Semalt zvirokwazvo ndiyo yekuenda-kune zvigadziriso hub yezvinhu zvese SEO zvine hukama. Bhizinesi rako zvirokwazvo riri mumaoko akachengeteka.